‘गफ हानेको होइन, जति लड्ने हो यो पुस्ता लड्छ, देश बन्छ, ढुक्क रहुँ’ : प्रधानमन्त्री (सम्बोधनको पूर्णपाठ सहित) – Upahar Khabar
प्रकाशित मिति : १ असार २०७७, सोमबार ११:५३ June 15, 2020
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब मुलुकमा फेरि आन्दोलन जरुरी नभएको बताएका छन् । सुशासन र स्वच्छता कायम गर्ने भन्दै उनले ढुक्क रहन आग्रह समेत गरेका छन् ।
आइतबारदेखि बैकल्पिक सिकाइ प्रविधि सुरु भएको अवसरमा शुभकामना सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक विग्रँदै पो छ कि ? मेरा अभिभावकको भोटबाट बनेको देशको सरकार कर्तव्यबाट चुक्दैछ कि ? आम सञ्चार माध्यममा देखिने विभिन्न मुलुकहरुमा पोखिएको आक्रोस वा दिक्दारी मेरो मुलकमा दोहोरिने हो कि ? कतिपय विज्ञासु युवाहरुको प्रश्न आफूले सुनेको बताए ।
उनले अघि भनेका छन्, ‘म एकमुष्ट भन्न चाहन्छु, जति लड्ने हो यो पुस्ता लड्छ । मुलक बन्छ । अबका दिनमा हाम्रा सन्तानहरु यस मुलकको भाग्यमानी पुस्ता बन्छ भन्ने तपाईँका अभिभावकहरुको भनाइ झुटा सवित हुँदैन ।’
मुलुकमा अब फेरि अर्को आन्दोलन आवश्यक नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । अप्ठ्यारोमा दुविधा हुने र त्यसलाई दुर गर्न नेतृत्व चाहिने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘आरोप लगाए जस्तो गफ हानेको होइन । ढुक्क रहुँ मुलुक बन्छ । सुशासन, स्वच्छता कायम हुन्छ ।’
सुदूरपश्चिममा २६ जना कोरोना संक्रमितलाई परीक्षण विना नै डिस्चार्ज